လှိုင်သာယာ ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဧ။် ဓါတ်တော်များကြွင်းကျန်ခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လှိုင်သာယာ ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဧ။် ဓါတ်တော်များကြွင်းကျန်ခဲ့
လှိုင်သာယာ ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဧ။် ဓါတ်တော်များကြွင်းကျန်ခဲ့
Posted by etone on May 7, 2012 in My Dear Diary, Photography, Science & Religion | 26 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးဧ။် ဓါတ်တော်များ
ကစင်ကျောင်းတိုက် မုဒ်ဦးကိုတွေ့ရစဉ် (ကားသွားနေတုန်းလှမ်းရိုက်တာမို့ ကြည်ကြည်လင်လင်မရခဲ့ဘူး)
ကစင်ကျောင်းတိုက်ထဲက ဘုရားစင်ပါ ။
ဓါတ်တော်ထည့်ပြီး ပူစော်ဖို့အတွက် အစဉ်သင့်ပြုလုပ်ထားတာပါ ။
ဓါတ်တော်တွေကို လောလောဆယ်တော့ ဒီလို ထားရှိ အပူစော်ခံထားပါတယ် ။
ကစင်ကျောင်း ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ သုမနမဟာထေရ် ၊ သက်တော်၉၇ ၊ ၀ါတော်၇၇ ဧ။် ပုံတော်
အောင်ဇေယျ တံတား အဆင်းအနီး ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်း ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးဧ။် ဓါတ်တော်များကို ၄-၅-၁၂နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အမှတ်မထင် ဖူးခွင့်ကြုံခဲ့ပါသည် ။ ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးဘဒ္ဒ န္တ သုမနမဟာထေရ် ၊ သက်တော် ၉၇ ၊ ၀ါတော် ၇၇ သည် ၁၀-၄-၁၂ ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့) မနက်ဆယ်နာရီခန့်တွင် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ၌ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည် ။ ဆရာတော်ကြီးဧ။် ရုပ်ကလပ်အား ၃၀-၄-၁၂နေ့ ည ၇နာရီအချိန်တွင် ဈာပန အခမ်းနားဖြင့် ယမ်းဒုံးကျည်ပစ်လွှတ် မီးသဂြိုလ်ခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ၊ သနပ်ခါးတုံးများနှင့် ယမ်းများအား မီးစာ အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည် ။ သာမန်အားဖြင့် ရုပ်ကလပ်လောင်ကျွမ်းချိန် နှစ်နာရီမှ သုံးနာရီ အထိသာ ကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်း ၊ ကစင်ဆရာတော်ကြီးဧ။် ရုပ်ကလပ်အား မီးသဂြိုလ်ရာ အချိန် ၆နာရီကျော်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည် ။ မီးငြိမ်းသတ်ပြီးချိန်တွင်တော့ အထက်ပါကဲ့သို့သော ဓါတ်တော်များကြွင်းကျန်ရစ်ခဲ့လေတော့သည် ။ ဓါတ်တော်များကို လတ်တလောတွင် ကစင်ကျောင်းတိုက်၌ပင် အပူစော်ခံထားရှိသည်ဟု သိရပြီး ဒေသခံမြို့နယ်နေ ပြည်သူများသာ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည် ။ မည်သည့် မီဒီယာ ၊သတင်းဌာန ၊ ဂျာနယ်များမှ သတင်းလာရောက်ယူခြင်း မရှိသေးဟုလည်း သိရသည် ။
( ဓါတ်တော်ဖူးမြော်ရန် ဖိတ်ကြားခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသော လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ရူပါစိုးအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။)
ဘယ့်နှယ်ရှိစ ရုပ်ကြမ်းဝါဒီ သဂျီးမင်း…
ကိုကြောင်ကြီးရေ .. ဓါတ်တော်တွေကို ကိုင်ထိ ဖူးခွင့်ရတုန်း မှတ်မှတ်ရရ သဂျီးကို သတိရမိပါတယ်….တကယ်ပါ ….
(ဓါတ်တော်တောင် ခိုးယူ ပူစော်ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် …တဒင်္ဂဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကို ရှက်မိလို့ ၊ ချိုးနှိမ်ပြီး ဒီအတိုင်းပဲ ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ် … လူစိတ်ဆိုတာ အချိန်ခါမရွေး ဖောက်ပြန်တတ်ပါလားလို့လည်း .. နားလည်မိခဲ့တယ် ) ။
သတင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ဒေါ်ဒေါ်
ဓာတ်တော်စစ် မစစ်ကို သဂျီးက ရဲစခန်း ထောက်ခံစာပါမှယုံမယ်လို့ ပြောတယ်ဗျာ
အင်း .. ဗိုက်ကလေးရေ … ဓါတ်တော် အစစ်တွေပါ … ကွန်ဖမ်းလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ အားနာလို့ အထောက်ထားတော့ မတောင်းခဲ့ဘူးဟယ် …
အိမ်မဲ မှာလည်း ဒီလို ဓါတ်တော်ကျတာတွေ ရှိခဲ့တယ် ဆရာမ
(ဓါတ်တော်ဆိုတာ အလုံးအလုံးလေးတွေ မဟုတ်လားလို့ ) မေးမယ့်သူများ ကို ရော ဖြေမယ့်သူများကိုရော စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ဦးဦးရေ .. ဓါတ်တော်ဆိုတာ အရင်က စပါးလုံးလေးတွေလောက်သာမြင်ဖူးတာပါ …
အခုနောက်ပိုင်း မိုးကုတ်ဆရာတော် ဦးဃောသိတ(စာလုံးမပေါင်းတတ်ဘူး) ဓါတ်တော်ကြွင်းတုန်းက … နှလုံးတော်ကြီးလိုက်ကို လက်သီးဆုတ်လောက်တောင် ကျန်ခဲ့တာပါ … ။ ဒီတစ်ခါ ကစင်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဓါတ်တော်ကလည်း အရိုးတော်တွေ ၊ အခွံတော်တွေ အများကြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ် … ။ ဓါတ်တော်ကို ကိုယ်တိုင် ဖူးခွင့် ကြုံတာ … ဒါတတိယ အကြိမ်ပါ .. ။
ကိုင်ဖူးခွင့်ကြုံတာကတော့ … ဒီတစ်ခါ ပထမဆုံးပါပဲ ။
လူအလောင်းမီးရှို့လို.. ပြာတွေ..အရိုးစတွေ..ကျန်ရစ်တာ.. ဘာအထူးအဆန်းလုပ်ပြောနေကြတာလည်းဟင်င်..
သေရစ်သူရဲ့.. တရားတွေ.. ဓမ္မတွေ… အယူအဆတွေကြိုက်နှစ်သက်သဘောကျရင်.. သူ့တရား..အယူအဆတွေ.. လေးစားလိုက်နာပေါ့..။ ပြန့်ပွားအောင် ပြောပြ..လုပ်ပြကြပေါ့…။
သဂျီးတော့ သွားရှာလေပြီ … ကျွတ်.. ကျွတ် … သနားထှာအေ … ။
မီးရှို့လိုက်လို့ ပြာဖြစ်ရမယ့် အချိန် … ၊ သံတောင် အရည်ပျော်တဲ့အချိန် … ပြာမဖြစ်ပဲ ကျန်နေတာ…. ဘယ်လို သိပ္ပံ နည်းပညာနဲ့ အဖြေရှာမလဲ … ။ ဘာလဲ … မီးနဲ့ ဒြပ်ပြုမှု မပြုဘူးလို့ …. ဘူးခံပြီး ငြင်းချင်သလားဟင်… ။ မယုံလျှင် ကိုယ့်လက်ကိုယ် မီးရှို့ ကြည့်ပါဗျို့ …. ။
ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးပုံလေးများ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်လျှင် … ကင်မရာထရိတ်နဲ့ အင်ထုတယ်များ ဆိုဦးလေမလား …. ။
ဒီတစ်ခါတော့ တဂျီးကို လုံးဝ လေးစားသွားပြီ ထောက်ခံတယ်ဗျို.
ကျွန်တော်လဲ အဲလိုပဲ မြင်တယ်….
သဂျီးေဲပြာတာ ကို လဲ လက်ခံ လို့ + ပေးထာလိုက်တယ်။
ခု ပို့ တင် သူ ပြောတာ က သာမာန် လူ တွေ လောင်းကျွမ်းပြီး ရင် ကြွင်းကျန် သလို မျိုး မဟုတ်ပဲ ရှိနေတာကို ပြောတာ ပါ သဂျီး ခင်ဗျ။
ကြားဖူးတာတော့ ဓါတ်တွေက အလုံးလေးတွေ.. အဲဒီ အလုံးလေးတွေ ညဘက်ဆို အရောင် ထွက်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ၆နာရီလောက် မှ မလောင်ကျွမ်းပဲ ကျန်တယ် ဆိုတော့.. အံသြစရာပါပဲ။
ဒီကိစ္စ ဒဂါ ဒဂါမ တွေနဲ့ ရှင်း
“… ရဟန္တာများလည်း ထို့အတူပင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး၌ ဓာတ်တော်အဆူဆူ လုံးလုံးဝန်းဝန်း အရွယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ရန် အဓိဋ္ဌာန်တော်မူရပါသည်။ အဓိဋ္ဌာန်တော်မမူပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်စံလျှင် တေဇောဓာတ်လောင်တော်မူပြီးနောက် လုံးလုံးဝန်းဝန်း မဟုတ်ပဲ အရိုးတော် ပကတိအတိုင်းပင် ကျန်ပါသည်။ …”
ဒီစာကို ဒီနေရာက ယူထားတာပါ …
နောက်ထပ် ဓာတ်တော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြည့်နိုင်တဲ့နေရာကတော့ ဒီနေရာမှာပါ …
အလိုအလို ၊ အငြင်းတွေပွား အငြားတွေပွင်းနေကြ ပါကလား ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါတုံ ရဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံများကို သိရှိခွင့်ရသွားပါ၏ ။
လူတွေ မှာ ကိုး ကွယ်စရာ ဒီလောက်ရှိနေတာ တောင် ဘာလို အဲဒီ ဓာတ်တော် ဆို လား ပြာ ရိုး ဆို လား( ပြာ မဖြစ်ရင် အမှုန့် ဖြစ်အောင် ကြိတ်ပလိုက် or တူ နဲ့ ထု ပလိုက် ) ပုကန်တွေ နဲ့ခွဲ ထားသေးတယ် မသိရင် အဲဒီ ဟာက အရိုးပြ အလှူငွေ တောင်နေ သလို ပဲ
ယုံကြည်တာ မယုံကြည်တာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဝေဖန် ပိုင်းခြားမှု ၊ ဘာသာ တရား ယုံကြည်မှုတို့ပေါ် မူတည်ပါတယ် … ။ မီးမလောင်ပဲ ကျန်ခဲ့တိုင်း … ရောတောဖောတော ဓါတ်တော်လို့ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး … ပညာရှင်တွေက သွားရောက်စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီးမှသာ … ဓါတ်တော်လို့ သတ်မှတ်တာပါ … ။ ဘယ်လိုစစ်ဆေး အတည်ပြုတာတော့ … ရေးခွင့်မရှိတာမို့ …. ။
ယုံကြည်သူတွေသာ ကိုးကွယ်ပါစေတော့လေ … ။
ပြောမနေနဲ့ဒေါ့ အီးဒုံးယေ.. သဂျီးဆိုဒဲအမျိုးဂ နှစ်လုံးပြူးတလက်ရှိနေရင် သူ့ကိုယ်သူ သိကြားမင်း ဝိရဇိန်မိုးဂျိုးလက်နက် ရထားဒယ်ထင်ဒါ။ ဩော်ငယံမကြောက် ဘာမကြောက်… ဝိုင်းဆဲဂျကွာ.. သူဒေါ်ဂေါင်းလောင်းလျာဂို ပြစ်မှားရင် ငယဲကြီးသလို ငယဲသွားမည့်သူဂို ဝိုင်းဆဲရင် နတ်ပြည်သေဂျာပေါက် ရောက်တယ်..။